Manaova takelaka sy liner ho an'ny ampahany amin'ny orinasa mpamokatra simenitra mpanamboatra sy mpamatsy | Youke
Manaova takelaka sy liner ho an'ny ampahany amin'ny fampiharana ny orinasa simenitra
Ny famokarana simenitra dia dingana sarotra izay manomboka amin'ny fitrandrahana ary avy eo mitoto akora misy vatosokay sy tanimanga, ho vovoka tsara, antsoina hoe sakafo manta, izay avy eo dia hafanaina hatramin'ny 1450 ° C ao anaty lafaoro simenitra. Amin'ity dingana ity, dia tapaka ny fatorana simika amin'ny akora ary avy eo dia atambatra indray izy ireo ho lasa kanto vaovao. Ny vokatra dia antsoina hoe clinker, izay boribory boribory eo anelanelan'ny 1mm sy 25mm ny sakany. Ny clinker dia nototoina hatramin'ny vovoka madinika ao anaty milina simenitra ary afangaro amin'ny gypsum mba hamoronana simenitra. Afangaro amin’ny rano sy aggregate avy eo ny simenitra voapoizina mba ho simenitra ampiasaina amin’ny fanorenana.
Ny indostrian'ny simenitra dia iray amin'ireo indostria lehibe ilaina amin'ny fampandrosoana maharitra. Azo heverina ho fototry ny fampandrosoana.
Ny fitaovana sy ny singa ampiasaina amin'ny fanamboarana simenitra sy simenitra manomboka amin'ny fanosihosena mialoha ka hatramin'ny vokatra farany dia misy fiantraikany amin'ny fiatraikany, ny abrasion ary ny erosion. Noho izany, ny fiainana, ny faharetana ary ny fisian'ireo milina ireo dia manana anjara toerana lehibe amin'ity indostria ity.
Amin'ny fahatakarana ireo anton-javatra rehetra ireo sy ny fahalalana lalina momba ny mekanika fitafy sy ny fepetra takiana manokana, dia afaka mamolavola sy manamboatra vahaolana manohitra ny fitafy namboarina i Youke.
Ny vahaolana ataonay dia manome fiarovana azo antoka sy maharitra amin'ny karazana fitaovana rehetra ampiasaina amin'ny indostrian'ny simenitra. Ho an'ny olan'ny fitafy rehetra dia manana vahaolana isan-karazany i Youke.
Ireto misy ohatra vitsivitsy amin'ny vahaolana Youke ampiasaina amin'ny asa simenitra
1. fitrandrahana harena ankibon'ny tany
Toeram-pitaterana entana amin'ny kamiao, fitaovana fampitaovana sy fitaovana fanorotoroana, ary angady ho an'ny excavator sy mpanety misy kodiarana
2. Fikarakarana fitaovana
Vidin'ny feeder, sliding materialy sy funnels, ny sisiny sy ny tsipika amin'ny conveyor rojo vy, ny rindrin'ny sisiny ary ny barazy amin'ny conveyors fehikibo.
3. Zavamaniry fanorotoro
Liners, fantson-drivotra, cones fanorotoro, valanoranon'ny fanosihosena sy tantanana fanorotoro, bara sy rotors fikosoham-bary
4. Fampifangaroana fandriana
Fitaovana fampifangaroana, reclaimers portal scraper, fitaovana
Rolling rolls sy singa fikosoham-bary ivelany liners, latabatra fikosoham-bary, mpankafy, separators, peratra manifolds, fanerena takelaka, fonony ary liners VAUTID dia afaka manamboatra horonana sy latabatra na ao amin'ny toe-javatra napetraka (in situ) na ao amin'ny atrikasa.
Liners, fittings, fitaovana famahanana, funnels ary fantsona
8. Lafaoro rotary
Fidirana ara-pitaovana, tobim-pifindrana, fongana
9. Clinker coolers
Clinker fampangatsiahana takela-bato, makarakara facings, lafiny rindrina fiarovana fiarovana
Rolling rolls sy rolls ivelany, latabatra fikosoham-bary, mpankafy, separators, manifolds peratra, takelaka fanerena, fonony ary liner VAUTID dia afaka manamboatra horonana sy latabatra na amin'ny toe-javatra napetraka (in situ) na ao amin'ny atrikasa.
12. Silo simenitra sy toby famonosana
Fantsona, fantson-drano, slide materialy ary fitaovana
End Disc Liner
teo aloha: Ny vokatra vita amin'ny fikosoham-bary ho an'ny orinasa mpamokatra siramamy
Manaraka: Manaova liner sy takelaka ho an'ny orinasa mpamokatra arintany herinaratra mafana
Vokatra manjavozavo sy mitafy ho an'ny orinasa mpamokatra siramamy ...
Overview Ny siramamy dia ampiasaina amin'ny zava-pisotro malefaka, zava-pisotro mamy, sakafo mahavelona, ​​sakafo haingana, vatomamy, mofomamy, vokatra vita amin'ny mofo, ary sakafo mamy hafa. Fary no ampiasaina amin'ny distillation ny rhum. Ny famatsiam-bola amin'ny siramamy dia nitarika ny vidin'ny tsena ho an'ny siramamy ambany noho ny vidin'ny famokarana. Hatramin'ny taona 2018, ny 3/4 amin'ny famokarana siramamy eran-tany dia tsy nivarotra tamin'ny tsena misokatra. Ny tsena eran-tany ho an'ny siramamy sy ny mamy dia manodidina ny 77,5 miliara dolara tamin'ny taona 2012, miaraka amin'ny siramamy misy...
Nampiakatra in-5 ny fanoherana ny akanjo vaovao...
Overview Ny harena ankibon'ny tany, amin'ny maha mpamokatra vokatra voalohany ampiasaina amin'ny sehatra rehetra, ny harena ankibon'ny tany dia azo antoka fa ampahany manan-danja amin'ny toekarena maro eran-tany. Ny fitrandrahana sy fanadiovana ireo mineraly sy metaly avy any amin'ny halalin'ny tany dia atao amin'ny toe-javatra tsy mamela heloka, any amin'ireo toerana lavitra indrindra, masiaka ary maina indrindra eto an-tany. Ny fepetra henjana dia mitaky vokatra sy vahaolana henjana kokoa. Ny fitaovana fitrandrahana dia iharan'ny fepetra fitafy faran'izay henjana indrindra amin'ny indostria rehetra. Ny lehibe...
Overview YK-100 dia chromium carbide weld plate overlay. Ny dingana famokarana mandroso ny YK-100, miaraka amin'ny microstructure sy ny zavatra simika, manome YK-100 ny toetra ambony. YK-100 mety amin'ny fampiharana misy abrasion avo sy ambany sy antonony fiantraikany. Misy amin'ny habe lehibe izy io na azo tapahina amin'ny endrika mahazatra. Ny Manufacture 100 dia amboarina amin'ny fampiasana weldin fatorana fusion mandroso ...
Overview YK-80T dia chromium tungstène carbide weld overlay plate tsy misy triatra. Ny dingan'ny famokarana YK-80T, miaraka amin'ny microstructure sy ny singa simika, dia manome ny YK-80 ny toetrany ambony. YK-80T mety amin'ny fampiharana misy abrasion avo sy antonony ny fiantraikany ambony. Misy takelaka lehibe na endrika mahazatra ary azo amboarina ho endrika sarotra. Ny famokarana YK-80T dia novokarin'ny ...
Overview YK-90 dia chromium tungstène carbide weld overlay takelaka tsy misy triatra. Ny dingan'ny famokarana YK-90, miaraka amin'ny microstructure sy ny singa simika, dia manome ny YK-80 ny toetrany ambony. YK-90 dia mety amin'ny fampiharana mitaky fanoherana mahery vaika amin'ny hafanana avo hatramin'ny 900 ℃. Misy takelaka lehibe na endrika mahazatra ary azo amboarina ho endrika sarotra. Fanamboarana...
Manaova liner sy takelaka ho an'ny arintany herinaratra mafana p...
Overview Tsy mitsaha-mitombo ny fangatahana herinaratra maneran-tany, indrindra any Azia. Ny karazam-pamokarana herinaratra rehetra: thermal, hydroélectrique na ireo kojakoja fako mirehitra dia mila fikojakojana mba hanohizana ny fiasana amin'ny fomba mahomby sy hamokatra herinaratra mora vidy. Ny fikojakojana ny orinasa tsirairay dia miovaova arakaraka ny tontolo iainana. Ny abrasion, ny harafesina, ny cavitation, ny mari-pana ambony ary ny fanerena dia mahatonga ny fanararaotana manerana ny famokarana herinaratra ...
Sinter Feed Tunnels, Fandrefesana: Fandoroana fantsona sy paompy, 8+4 Mitafy takelaka, Efijery mafana, Swing Chutes Liners, Grates,